Dlala · I-Hutong Life Indlu yokugezela yangasese Imizuzu engu-5 yokuhamba uye esiteshini sesitimela sesikhumulo sezindiza Eduze ne-Jie Street, Ukungena okuvamile kwe-Dao Camp okuvamile Siyakwamukela - I-Airbnb
Dlala · I-Hutong Life Indlu yokugezela yangasese Imizuzu engu-5 yokuhamba uye esiteshini sesitimela sesikhumulo sezindiza Eduze ne-Jie Street, Ukungena okuvamile kwe-Dao Camp okuvamile Siyakwamukela
Ikamelo e-i-kezhan ibungazwe ngu-G
U-G Ungumbungazi ovelele
Igceke elincane "indlu yokudlala": ukudlala okumnandi, ukuhlala ngokunethezeka.
Kuyinto ekhohlisayo ngempela, thola indawo ethulile ebhubhane, vumela umoya, ilanga, ufunde incwadi, uphuze itiye (PS: Zicabange njengomakhalekhukhwini we-solar, ogcwele amandla).
Igceke lisendaweni enhle, eduze kwesiteshi sesitimela sesikhumulo sezindiza. Ungahamba futhi uhlole i-alley, futhi imakethe yemifino eseduze iwumlilo oyivela-kancane ngesikhathi sobhubhane.
Idolobha lonke alikwazi ukudla. Ukuze udle ukushaywa wumoya okuncane nokuphila okunempilo, umphathi uzopheka ubusuku ngabunye (abapheki bemindeni yakudala futhi badle kahle). Wonke umuntu angadla isidlo esisodwa esishisayo nesithokozisayo nsuku zonke. Imenyu nenani kuyamenyezelwa njalo ekuseni. Unga-oda izitsha ~ Kukhona ne-barbecue nehhovisi lebhodwe elishisayo elineziphuzo ngezikhathi ezithile.
Izinto ezifihlekile: Phakathi nobhubhane, ungaphila impilo enempilo, futhi ugxume izintambo ezingu-1,000, futhi udle mahhala ~
Umnikazi uyakuthanda ukudlala, futhi iningi lama-alley amancane azungeze indawo ezungeze idolobha elikhulu liye laduma!Umnikazi naye uyakuthanda ukudla futhi angatusa i-Nuyen Hue Street eseduze nazo zonke izinhlobo zokudla kwasendaweni.
Inhloso yasekuqaleni yedizayini yaleli gumbi isilinganiso esiphezulu sokusebenza kwentengo. Incane, kodwa inazo zonke izitho zangaphakathi. Esitezi sokuqala segumbi, kunezindlu zangasese ezihlukene kanye namagumbi okugeza awomile noma amanzi.Okuzizwisa okunethezekile akuphazanyiswa ubukhulu. Kukhona umatilasi ophindwe kabili esitezi sesibili, kanye nezingubo zokulala ezikhethwe ngokucophelela kanye nokwelashwa kokufakwa komsindo okulimaza izinwele zami, okuzonakekela ukulala kwakho.
Izinsiza egcekeni onazo Ikhishi linomshini wokuwasha, isiqandisi, i-microwave, i-full kitchenware kanye nomshini wekhofi (mahhala).
4.98 · 99 okushiwo abanye
Itholakala endaweni eyi-core alley yaseBeijing, uhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka esiteshini esingaphansi komhlaba. Ungaya ezindaweni ezikhangayo ezihlukahlukene edolobheni ngokushesha nje lapho uhamba.
Mina nomphathi wezitsha sizophendula ocingweni lwakho amahora angama-24 ngosuku
UG Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Beijing namaphethelo